कर्णाली प्रदेश ब्युरो - कान्तिपुर समाचार
कर्णाली प्रदेश ब्युरोका लेखहरु :
कांग्रेस अधिवेशन : स्थानीय तहमा युवा नेतृत्व
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ५५ स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसको पालिका स्तरको गाउँ/नगर अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये १५ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको हो भने अन्यत्र सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ । अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेहरू अधिकांश युवा छन् ।
कर्णाली कहिलेसम्म भोकै ?
कालीकोटको पलाता गाउँपालिका–२ लार्फका ६१ वर्षीय मनरूप विश्वकर्मा चामलका लागि ३ घण्टाको ओरालो झरेर बिहीबार थिर्पु खाद्य डिपो पुगे । डिपोमा चामल सकिएकाले पाउन सकेनन् । सरकारले ढुवानी अनुदानमा दिने चामल नपाएपछि तिहार मनाउन उनले स्थानीय बाख्रे बजारबाट प्रतिकिलो ५६ रुपैयाँ तिरेर मोटो चामल खरिद गरे ।
हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा पुगेको थाहा पाएपछि साउन १४ गते डोल्पा, जगदुल्ला गाउँपालिका–६ रिमीकी भगवतीकुमारी मल्ल आफ्नो समस्या लिएर उनीसँग भेट्न गइन् ।
शनिबार बिहान करिब १० बजेतिर एक्कासि ठूलो संख्यामा आएको सलहको हूलले मकैबारी छपक्कै ढाक्यो । भेरीगंगा–१३ का सोमलाल खत्रीसहित किसानले थाली बजाए, होहल्ला गरे तर सलह भागेन ।
कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरु हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा हवाइ सेवा सुचारु भएको छ । लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण खाद्यान्‍न, दैनिक उपभोग्य र निर्माण सामग्रीको अभाव हुन थालेपछि हवाइ सेवा सुचारु गरिएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको तयारी नपुग्दा कर्णालीमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ । तर उपचार, परीक्षण र सतर्कता भरपर्दो नहुँदा संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिने जोखिम बढिरहेको हो ।
कर्णालीका स्थानीय तहले बाँडे सवा १७ करोडको खाद्यान्न
लकडाउनयता कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले करिब १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न वितरण गरेका छन् । लकडाउनको दोस्रो साताबाट सुरु भएको राहत वितरण अहिले पनि चलिरहेको छ ।
सडक निर्माणका लागि डोजरसहित धौलागोहको लार्फ पुगेका कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बममाथि शनिबार दिउँसो आक्रमण भयो ।
विदेशबाट फर्किएकामा कोरोना संक्रमणबारे परीक्षण गर्न कर्णालीका १० वटै जिल्लामा र्‍यापिड डायग्नोष्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट पठाउन थालिएको छ। किट जिल्लामा पुगेसँगै परीक्षणका लागि स्वास्थ्यकर्मी गाउँगाउँमा खटिन थालेका छन्।
रुकुम पश्चिमका चार क्वारेन्टाइनमा ३९ जनालाई राखिएको छ । उनीहरुको नमुना संकलनमा समस्या भएपछि २ जनाको मात्रै स्वाब परीक्षण गरिएको छ । दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र उपकरण नहुँदा क्वारेन्टाइनमा बसेकाको स्वाब संकलन हुन नसकेको हो ।